Etihad Airways dia miasa fiaramanidina eco avy any Abu Dhabi mankany Bruxelles
Home » Lahatsoratra farany farany » Fandefasana gazety » Etihad Airways dia miasa fiaramanidina eco avy any Abu Dhabi mankany Bruxelles
Airlines • Airport • Vaovao Mafana Belzika • Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Vaovao • Fandefasana gazety • tompon'andraikitra • teknolojia • Tourism • Fitaterana • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Travel Wire News • Vaovao isan-karazany
Ny Etihad Airways, ilay kaompaniam-pirenen'i Emirà Arabo Mitambatra, dia niasa 'sidina fiaramanidina manokana' avy any Abu Dhabi ka hatrany Bruxelles, izay ahitana karazana fandraisana andraikitra natao hanehoana ny fahavononan'ny zotram-piaramanidina hanao fomba maharitra eo amin'ny rivotra sy ny tany.
Ny sidina EY 57, izay tonga tany Bruxelles taloha kelin'ny 7.00 maraina, dia niara-niasa tamina a Boeing Ny fiaramanidina Dreamliner 787, ny karazany farany sy mahomby indrindra amin'ny Etihad sambo, izay mandany solika 15 farafahakeliny farafahakeliny noho ny karazana fiaramanidina nalefan'ilay fiaramanidina teo aloha.
Ny fiaramanidina dia nanaraka ny làlan'ny sidina nohamarinina izay natolotry ny mpanome tolotra fiaramanidina eoropeanina Eurocontrol hanampiana amin'ny fampihenana ny fanjifana solika sy ny gazy karbonika. Maromaro ihany koa ny hetsika hafa notontosaina talohan'izay, nandritra ary aorian'ny sidina nahitana ny fepetra fanatsarana solika sy ny hetsika hafa miaraka amin'ny mpiara-miasa toa ny Seranam-piaramanidina Bruxelles sy ireo mpamatsy serivisy kabine hanasongadinana ireo fotoana mety hampihena ny fiantraikan'ny kaompaniam-piaramanidina eo amin'ny tontolo iainana.
Ny sidina androany dia natokana hifanindry amin'ny fiatombohan'ny herinandro faharetan'ny Abu Dhabi, hetsika fanao isan-taona natao tao an-drenivohitra UAE mba hanasongadinana ireo fandraisana andraikitra maharitra manerana ny faritra maro.
Ny Lehiben'ny mpanatanteraka ao amin'ny vondrona Etihad Aviation Group, Tony Douglas, dia nilaza hoe: "Ny fampiharana maharitra dia fanamby iray manankery sy mitohy ho an'ny indostrian'ny fitaterana an-habakabaka, izay ezahina hampihena ny famoahana entona sy ny fako, ary eo am-pivoriana amin'ny fangatahana fitaterana an'habakabaka. Io koa dia laharam-pahamehan'ny Emirà Abu Dhabi, izay i Etihad no mpamily fanitsakitsahana ny fampandrosoana ara-tsosialy sy ara-toekarena. ”
“Ny lohahevitra nasionalin'ny Emira Arabo Mitambatra amin'ity taona ity dia ny '2020: ho any amin'ny 50 manaraka'. Etihad dia manolo-tena hiasa tsy tapaka miaraka amin'ny mpiara-miombon'antoka isan-karazany ao anatin'ny fifantohana nasionaly bebe kokoa amin'ny fitohizan'ny tontolo iainana. "
Amin'ny ivon'ny fanoloran-tenany amin'ny sidina maharitra, Etihad Airways dia manohy mampiditra vola amin'ny taranaka farany, fiaramanidina tsy misy solika indrindra, mampitombo ny fiaramanidina Boeing 787 Dreamliners ary miomana hampiditra karazana telo vaovao, ny Airbus 350-1000 feno vatana ary Boeing 777-9, ary ilay Airbus A321neo somary tery.
Ny Etihad Airways dia niara-niasa tamin'ny Banky First Abu Dhabi sy ny Global Market an'i Abu Dhabi izay lasa zotram-piaramanidina voalohany ahazoana famatsiam-bola arakaraka ny fanarahana ny tanjon'ny fampandrosoana maharitra an'ny Firenena Mikambana ary mikaroka safidy momba ny famatsiam-bola mitovy amin'izany amin'ny fandraisana andraikitra hafa.
Nanambara ny programa Etihad Greenliner Program ny zotram-pitaterana an'habakabaka izay ampiasaina amin'ny alàlan'ny fiaramanidina Boeing 787 manontolo ho fitsapana manidina ho an'ny karazana hetsika maharitra ataon'ny Etihad sy ireo mpiara-miombon'antoka aminy. Ny mpiara-miasa voalohany amin'izany dia i Boeing, izay hanatevin-daharana an'i Etihad amin'ny fandaharam-pikarohana feno, manomboka amin'ny herinandro ambony miaraka amin'ny fanolorana «sonia» vaovao Boeing 787, izay natao manokana hanasongadinana ny fiaraha-miasa maharitra amin'ireo orinasa roa ireo.
Etihad koa dia mpanohana matanjaka ny lasantsy fiaramanidina maharitra ary manohy miara-miasa amin'ireo mpamatsy ao anatin'izany ny Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC) sy Tadweer (Abu Dhabi Waste Management Center) momba ny fandraisana andraikitra amin'ny solika amin'ny ho avy. Ho fanampin'ny làlan'ny sidina haingam-pandeha sy ny fepetra fanatsarana solika, misy ireo hetsika natao hanohanana ny 'Ecoflight' tany Bruxelles maraina:
Plastika fampiasana tokana faran'izay tsotra ao anaty sambo, ao anatin'izany ny fanesorana plastika fonosana amin'ny lamba firakotra, takelaka fonosina amin'ny taratasy (Toekarena) ary kitapo volory (Orinasa), kitapo tsy misy plastika; kojakoja metaly maivana (Sola Cutlery Netherlands), sakafo aroso amina lovia aluminium, rano aroso anaty boaty azo averina (Oasis), ary kapoaka zava-pisotro mafana soloina kaopy azo amboarina (Koban'ny lolo);
• Takelaka miorina amin'ny varimbazaha (Biotrem) manaova sakafo takiana amin'ny kilasy orinasa;
• Traktera mandeha amin'ny herinaratra hanampy amin'ny fitaterana entana sy valizy eo anelanelan'ny terminal sy ny fiaramanidina ao Abu Dhabi. Vao nahazo ny fiara 10 amin'ny 94 voalohany toy izao ny zotram-pitaterana an'habakabaka, hatolotra mandritra ny taona 2020;
• Fotoana haingana an'ny taxi avy any amin'ny terminal Abu Dhabi mankany amin'ny lalamby, hampihenana na hanafoanana ny fotoana itanana amin'ny motera mandeha; SY
• Fampiasana herinaratra an-tanety any amin'ny tobin'ny seranam-piaramanidina Abu Dhabi sy Bruxelles fa tsy ny herinaratra mpanampy ampiasain'ny solika.
Ny seranam-piaramanidina Bruxelles dia 'tsy miandany toetrandro' amin'ny famoahana kariboniny manokana amin'ny alàlan'ny fandraisana andraikitra marobe, anisan'izany ny fampiasana bus bus ho an'ny fitaterana mpandeha sy gazy voajanahary voafintina ho an'ireo fiara fitaterany manokana, ary mizaha ireo safidy ao anatin'izany ny fampiasana fiara elektrika ho an'ny fiaramanidina mitaingina sy taxi-out.
• Etihad koa dia manatanteraka na mihevitra ny fandraisana andraikitra maharitra hahitana ny:
• Fanadiovana tsy misy rano ny fiaramanidin'ny fiaramanidina, fanatsarana ny fampisehoana ary fanesorana ny diloilo sy loto mba 'hampandeha' ny fiaramanidina ary hampihena ny 'drag' aerodynamika;
• Fanadiovana ny milina fiaramanidina 'Eco-wash' hanampiana amin'ny fanatsarana ny fahombiazan'ny solika sy hampihena ny entona ary;
• Fampihenana ny plastika tokana ampiasaina amin'ny 80 isan-jato amin'ny 2022.